U.N. rejects Myanmar claim that it agreed to help build housing for refugees – CRM
Posted on October 26, 2017 Author swelsone	Comment(0)
YANGON (Reuters) – A UN settlement program, UN-Habitat in Myanmar, on Thursday rejectedastate media report that it had agreed to help build housing for people fleeing violence in the northern Myanmar state of Rakhine, where an army operation has displaced hundreds of thousands.
The state-run Global New Light of Myanmar newspaper said on Thursday that UN-Habitat had agreed to provide technical assistance in housing displaced people in Rakhine and the agency would work closely with the authorities to “implement the projects to be favorable to Myanmar’s social culture and administrative system”.
Posted on June 1, 2018 Author swelsone
တဖက်နိုင်ငံက ပြန်ဝင်လာသော ဘင်္ဂါလီ ၆၂ ဦးကို ပြစ်ဒဏ်မှ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်ပေးပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တော မြို့နယ် လှဖိုးခေါင် ကြားစခန်းတွင် ထားရှိခဲ့ရာ ၁၀ ဦး ထွက်ပြေးသွားကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ မောင်တော မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမြင့်ခိုင်က“၁၀ ဦး ပြေးတယ်လို့ ကြားတယ်။ ကျနော်တို့က စခန်းကို လွှဲပေး လိုက်ပြီ ဆိုတော့ တိုက်ရိုက် Control မလုပ်တော့ဘူး။ ပြန်မိလား၊ မမိဘူးလား ဆိုတာ ပြောရခက်တယ်။ ဟိုဘက်ကို ပြေးတာတော့ မဟုတ်လောက်ဘူး။ သူတို့ ရွာတွေကို ပြေးတာ ဖြစ်မယ်”ဟု ဧရာဝတီ သို့ ပြောသည်။ ထိုဘင်္ဂါလီ ၁၀ ဦး ထွက်ပြေးသွားသည် ဆိုသော သတင်းသည် လူမှုကွန်ရက် […]
Media Contact 202-225-5021 Washington, D.C. – Tomorrow at9a.m., House Foreign Affairs Committee Chairman Ed Royce (R-CA) will conveneahearing to discuss the U.S. response to Burma’s escalating violence against the Rohingya. The hearing is entitled “The Rohingya Crisis: U.S. Response to the Tragedy in Burma.” Chairman Royce on the hearing: “Burma’s violence against the […]